Luka Jovic tantaran'ny tantaram-pahaterahana ao amin'ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Luka Jovic tantaran'ny tantaram-pahaterahana ao amin'ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny lalao fanta-daza fanta-daza "Serba Falcao". Ny tantaran'i Luka Jovic momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-mitranga mahatalanjona hatramin'ny andron'ny fahazazany hatramin'izao.
Luka Jovic tantaram-pitiavana- Hatramin'ny vanim-potoana hatramin'ny fahazazana
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny tanjony eo anoloan'ny tanjona, iray izay nahatonga azy ho iray amin'ireo mpilalao baolina kitra be mpankasitraka indrindra amin'ny baolina kitra Eoropeana. Na dia izany aza, afa-po vitsy monja amin'ireo mpankafy baolina kitra no mandinika ny tantaran'i Luka Jovic izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, aleo atomboka.
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Luka Jovic dia teraka tamin'ny 23rd ny volana desambra 1997 ho an'ny reniny, Svetlana Jovic ary rain'i Milan Jovic (mpilalao baolina taloha) tao amin'ny tanànan'i Bijeljina, Bosnia sy Herzegovina.
Jovic dia nihalehibe tao amin'ny trano iray mahantra niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny sy rahavaviny tao ambanivohitr'i Batar, izay 14 kilaometatra atsimon'i Bijeljina. Talohan'ny nahaterahany, ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany manontolo dia nijaly tamin'ny fihantsiana sy ny fanodinkodinana nataon'ny 1990 izay nitranga tany Bijeljina, Bosnia and Herzegovina.
Luka Jović Fianakaviana sy ireo firenen-kafa indray no nijaly noho ny fihantsiana tany am-piandohan'ny 1990.
Ity tsy fandriampahalemana an'i Bosnia sy Herzegovina ity dia nanakana ireo mpilalao baolina tsy hanana asa tsara, ary ny rain'i Luka Jovic dia teo am-pelatanany. Mampalahelo, i Milan Jovic dia nahazo fahafahana hilalao baolina am-pirahalahiana miaraka amin'i Partizan Belgrade izay nanolotra vola kely ho an'ny ankohonany.
Niroborobo, tsy nisy kilalao na lalao, jiolahim-boto izay i Jovic nisintona sy nilalao tamin'ny rainy. Ny dadan'i Luka Jovic, i Milan tamin'ny fotoana fohy dia nanapa-kevitra ny hanohy hiaina ny nofinofiny amin'ny zanany lahy.
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Fanabeazana sy fanabeazana
Raha manana dadan'ny baolina kitra be fitiavana sy reny mampahazo aina iray, dia voajanahary fotsiny ny fitiavan'ilay lalao mahafinaritra namboarina tao amin'ny tovovavy Luka Jovic izay hita matetika tamin'ny fialan-tsasatra niaraka tamin'ny rainy. Namporisihan'i Milan ny zanany hifantoka amin'ny fanabeazana baolina kitra amin'ny fanantenana hanampiana azy hanohy hiaina ny nofinofiny tsy hita maso.
Luka Jovic- Fanabeazana sy fananganana fanabeazana. Credit to IG
Nampidirin'i Luka Jovic tamin'ny lalao tamin'ny 5 tao amin'ny 2002 ny taona, ny taona nitsanganany ho an'ny baolina kitra dia nahita azy nanakorontana ny fianarany noho ny fahafahana hanomboka fanombohana.
Ao amin'ny 2004, ny nahazoan'i Luka vintana taorian'ny fisedrana nahomby dia nahazo ny fahafahana hametraka ny fototra iorenany eo amin'ny sehatra Mini Maxi. Ity ligy fampandrosoana iray ao Belgrade ho an'ny ankizy antitra 4 sy 12. Talohan'ny nandehanana nisafidy ny lalao voalohany, nampianatra azy ny fomba hiasa amin'ny tongotra roa ny dadan'i Jovic. Na dia nankasitraka ny tongony havanana aza anefa i Jovic tamin'ny voalohany, dia nianatra nitifitra ilay baolina izy ary natoky ny havia.
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ny talentan'i Luka Jovic dia niharihary avy hatrany tamin'ny lalao voalohany tamin'ny lalao. Fantatrao ve?… Nanao baolina iray tao amin'ny lalao voalohany izy, izay nahitana ny tale mpitantana ny klioba hanome vola ho an'ny rainy mba hamporisika ny zanany hanatratra tanjona marobe.
Milan Jovic dia nanolotra € 50 ho an'ny tanjona tsirairay nosoratany. Izy koa dia nandoa vola amin'ny vidin'ny dinam-piaramanidina 2000 izay nahatonga azy hitondra an'i Luka avy any amin'ny tanàna kely any Belgrade. Izany rehetra izany dia natao satria ny zanany lahy dia heverina ho mpilalao sarobidy indrindra amin'izy ireo.
Tao amin'ny lalao iray nataon'i Jovic izay nandrehitra tanjona, novalian'i Toma Milićević, Scout Red Star izay nanasa azy hiatrika ny Red Star Belgrade. Nandalo ny loko i Luka Jovic ary niditra tao amin'ny club izy. Ity ambany ity ny sariny ao amin'ny loko.
Luka Jovic Ny fiainam-pianakaviana tany am-piandohana
Talohan'ny nidirany tao amin'ny klioba, ny raim-pianakavian'i Jovic indray dia nitondra azy hiaraka amin'ny Partizan, klioba iray izay nilalaovany noho ny faniriany hanao sonia an'i Jović. Partizan dia nanolotra Milan 200 euros isam-bolana ho an'ny zanany lahy Luka Jovic hiara-milalao amin'izy ireo, saingy niova hevitra izy ary nanindry mafy ny zanany lahy kely dia hijanona amin'ny Red Star.
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Road to Fame Story
Nanohy namiratra tao amin'ny ekipa tanora i Jović ary noraisina haingana ho toy ny fitsangatsanganana ho an'ny ho avy. Niroborobo tamin'ny zatovo izy, nanomboka nanararaotra ny Ibrahimovic sy Radamel Falcao. Fantatrao ve?… Jovic indray nanoratra ny anaran'ireo sampy tao anaty fononteny taorian'ny teniny tao amin'ny pejiny Facebook.
Tamin'ny 28 May 2014, tamin'ny taona 16 taona dia nanao ny lahateniny matihanina tamin'ny Red Star i Jovic. Vao niditra tao amin'ny asany matihanina izy dia noroahiny ny rakitsoratr'i Dejan Stanković ho zana-tovolahy faran'izay kely indrindra amin'ny lalao fifaninanana amin'ny tantaran'ny klioba.
Luka Jovic Road ho an'ny tantaram-pirenena. Bola ho an'ny RedStar sy IG
Ity hetsika mahatalanjona ity dia nahita klioba nanerana an'i Eoropa nitady ny soniany. Nisy ny fanapahan-kevitra nitranga tamin'ny Febroary 2016 rehefa nanapa-kevitra i Jovic mba hifindra any amin'ny kijana vaovao. Ny kintan'ny baolina kitra 18-taona dia nanao ny fihetsika voalohany niasany tamin'ny fotoana niarahany niarahany tamin'ireo benifika goavana Benfica.
Rehefa lasa sarotra ny mandeha:
Raha tao Benfica i Jovic, dia nisy ny tatitra avy amin'ny Football Leaks izay nibaribary ny fahalianana amin'ny fifanarahana an'i Jović, sombin-baovao izay nandrava ny kintan'ny tanora. Taty aoriana indray, nanomboka nanakenda ny fivoaran'ny toe-draharaha i Jovic ary niteraka fahasahiranana ho an'ny tanora mpilalao baolina kitra izany.
Luka Jovic Road ho an'ny tantaram-pianakaviana - rehefa lasa henjana ilay izy. Credit to IG
"Nanan-java-manahirana aho, nanana trano fonenana aho ary nanao fahadisoana lehibe."
hoy i Jovic Breakingthelines tatitra. Ny seranam-piaramanidina izay nandroso tamin'ny fiatrehana voalohany ny mpilalao sarimihetsika tao amin'ny Red Star dia nahatsikaritra ny tenany hilalao ho an'i Benfica B ao amin'ny Segunda Liga.
Taorian'ny nanadinoany an'i Eoropa, dia nisy klioba iray nijoro teo anilany noho ny fangatahana nataony ho an'ny Serba. Ny klioba alemana Eintracht Frankfurt no namonjy an'i Jović tamin'ny alàlan'ny nofantsihin'ny basy Benfica. Nanaiky hividy azy ny klioba ary naharitra ny fifanarahana.
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Mitsangàna amin'ny tantara
Taorian'ny vanim-potoana faharoa tany Alemaina, dia nahazo ny endriny ny vorona sy ny fahatongavany haingana ary lasa ampahany manan-danja tamin'ny ekipa voalohany tao Eintracht Frankfurt. I Jovic dia nanjary fantatra fa olona iray izay mamely ny baolina marefo amin'ny tongotra roa. Nahazo fitahiana ara-potoana izy, izay nitondra tanjona tsara sy fankalazana goavana.
Luka Jović nitsangatsangana ho tantara. Credit to Playingfor90
Jovic dia niaritra fiakarana an-tanandehibe ho amin'ny toerana ambony izay nahatonga azy ho lasa toeram-pambolena tsara indrindra sy tanora indrindra any Eorôpa. TSeranam-piaramanidina izy, izay manana an'i Madrid Madrid mandondòna eo am-baravarany dia lasa ambony sy matanjaka ary tsy vonona ny hanala ny tongony hiala amin'ny pedal gazy. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Relationship Life
Miakatra ny lazan'i Jovic, azo antoka fa ny mpanohana azy dia mety hanontany ilay fanontaniana mirehitra. Iza ilay sipany, ny vadin-dry Luka Jovic no miantso azy, WAG ?.
Luka Jovic dia nifandray tamin'ny Andjela Manitasevic hatramin'ny androany niarahany tamin'ny Red Star Belgrade. Ity ambany ity ny sarin'ny vorona tiany mandritra ny fifandraisana amam-panahiny.
Luka Jovic Fifandraisana amin'ny fiainana - Ny zava-misy tsy fantatra
Raha jerena ny sary etsy ambany sy ny ambany ety, dia hita fa ny Andjela Manitasevic dia mety ho efa antitra noho ny lehilahy. Iza no hiraharaha!! Na izany aza, ny tena fitiavana dia manan-danja ary ny isa dia maromaro ihany.
Andjela Manitasevic sy Luka Jovic
Luka Jovic dia fantatra amin'ny fanehoana ny fandripahana azy sy ny ankizivavy Andjela Manitasevic ao amin'ny media sosialy. Tsy isalasalana fa samy manana fifandraisana miorina izay mifandray amin'ny finamanana izy ireo.
Andjela Manitasevic sy Luka Jovic dia tia mijery fotoana tsara
Ny fiarahan'ny mpifankatia dia miara-misakafo mandritra ny fotoana tsy ampoizina fa ny fampakaram-bady dia mety ho dingana manaraka ho azy.
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Fiainana manokana
Ny hahafantaranao ny fiainan'i Luka Jovic manokana dia hanampy anao hahazo sary feno azy. Manomboka amin'ny, Jovic dia manana saina misokatra. Tena be fanantenana izy, mafana fo, ary tia fiovana. Afaka manova ny eritreriny amin'ny hetsika henjana i Jovic ary hanao zavatra mba hahatratrarana ny asany sy ny tanjony manokana.
Ny mpilalao baolina kitra, toy ny ao amin'ny LifeBogger ihany no tia ny biby fiompinay ary i Luka Jovic ihany koa dia tsy fahita firy. Na dia misy ihany aza ianao miteny dia tsy mijanona ao amin'ny lalao maoderina, tsy midika izany fa ny fifandraisana nozaraina teo amin'i Jovic, ny alika sy ny monkey.
Ny fiainan'i Luka Jovic manokana
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- LifeStyle Life
Jovic dia manan-danja amin'ny £ 49.50 m izay midika ara-bakiteny hoe mpilalao baolina an-tapitrisany. Na dia izany aza, ny fitsaràna amin'ny kaonty media sosialy, izy no karazan'ny mpilalao baolina kitra izay mandany ny vola miditra amin'ny làlam-pandehanana goavana amin'ny tany sy ny rano.
Jovic, na izany aza, dia tsy voamarik'ireo fiara marevaka marevaka tsara tarehy, manosika, ny trondro ary ny tovovavy. Izy dia mahay mandanjalanja amin'ny fitantanana ny vola miditra amin'ireo lafiny amin'ny fiainana.
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Raha miresaka momba ny fianakavian'i Luka Jovic izy ireo, dia manana ny fotony avy any Yogoslavia izy ireo taorian'ny Ady Lehibe II dia nipoitra tao amin'ny repoblika enina, iray amin'ireo dia Bosnia ary Herzegovina. I Milan, rain'i Luka Jovic, teraka tao 1975 dia elatra havia antokon'ny klioban'ny Partizan tao Serbia.
Ny dadan'i Luka Jovic dia Milan Jović. Nostalgija
Tsy tahaka an'i Luka zanany lahy, i Milan dia mbola tsy nahavita hevi-dehibe marobe tamin'ny asany. Nifanandrify tamin'ny lalao 82 ihany izy tamin'ny sehatra seniorerany nahazo ny Ligin'ny Premier League tamin'ny taona 2000 talohan'ny nananganany ny boots tao 2003.
Milan Jovic sy Svetlana vadiny dia tia ny fiainana antenantenany any Serbia na dia eo aza ny harenan'ny zanany amin'ny baolina kitra. Izany vaovao izany dia tonga rehefa alemana Bild Ny gazety iray indray mandeha dia nitady ny sombin-tsarin'ny fianakaviana ao Luka Jovics any Serbia. Nahita ny rainy sy ny fianakavian'izy ireo izy ireo.
Ny Papa Luka Jovic -Papa Milan. Credit to picture
Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'i Blid, dia nanambara i Milan Jovic fa nanambany an'i Svetlana vadiny ny rahavaviny noho ny asan'ny zanany lahy ary nahazo ny dina nodiaviny. Ankehitriny, ny raim-pianakavian'i Jovic, ny mamanay, ny anabavy ary ny havany dia nahazo ny tombotsoan'ny risika azon'ny lohan'ny fianakaviana.
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Untold Facts
Fantatrao ve?… Ny volana 2015 ny volana XNUMX dia volana fisedrana ho an'ny fianakavian'i Luka Jovic. Fotoana nanaparitahana ny fianakaviana tamin'ny tànan'ny mpangalatra iray avy any Loznica (tanànan'i Serbia) izay nandrahona an'i Luka Jovic fa raha tsy mandoa vola aminy izy dia "tapaho ny ranjony".
Luka Jovic Facts tsy hita. Bilaogy ao amin'ny YouTube sy IG.
Voasambotra ilay olona ahiahy taorian'ny filazan'ny ray aman-drenin'i Jovic tamin'ny polisy izay nandany fotoana hamotopotorana sy horaisin'ilay mpametaveta boky.
Fantatrao ve?… Luka Jovic dia nahazo loza tamin'ny fiara Mercedes tao Patkovača, akaikin'ny toerana nahaterahany ao Bijeljina ao Bosnia and Herzegovina. Nandritra ny loza dia naratra i Luka Jović saingy voavonjy avy hatrany taorian'ny fidirana haingana.
Luka Jovic indray mandeha tsy fantatra. Credit to Fenix.
Fantatrao ve?… Jovic dia manana tatoazy eo amin'ny tratrany, iray izay nitazona mpankafy nanontany ny dikan'ny tatoazy.
Latsin'ny Tattoo Luka Jovic
Tahaka ny sarin'i Jesoa izay maneho ny finoana Otôtôdôksa kristiana izay mipaka any Serbia. Navoitran'i Jovic voalohany ity tatoazy ity nandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny 2018 FIFA ao Rosia.
Fantatrao ve?… Jovic no mpilalao taloha indrindra mba handrefesana tanjona dimy amin'ny lalao baolina federaly iray. Rakitsary notohanan'i Robert Lewandoski. Ity ambany ity ny lahatsarin'ny tanjona fivezivezena raketiny amin'ny lalao tokana.
Luka Jovic Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Video Summary
Azafady mba jereo eto ambany, ny fijerin'ny lahatsary YouTube ho an'ity profil ity. -katsaram-panahy Fitsidihana sy famandrihana ho antsika Youtube Channel for More Videos.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Luka Jovic momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Diary Football Benfica
Serasera amin'ny baolina kitra Serba
Gedson Fernandes Tantaran'ny Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Haris Seferovic tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa
Joao Felix Fihetseham-pon'ny Tanoran'ny Tantara Nalaina An-tebiteby
Ny tantaran'i Nelson Semedo Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Andre Gomes tantara an-tsary momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa
Daty efa namboarina: 22 septambra 2020
Sergej Milinkovic-Savic tantaran'ny tantaram-pianakaviana maro tsy fantatra
Daty efa namboarina: 25 Janoary 2019
Ny tantaran'i Nemanja Matic momba ny tantaram-pitiavam-bahasa tsy hita isa